“Qosol ayaan la dhacay markii ugu horreysay aan arko isagoo ciyaaraya.”. Ryan Giggs oo daaha ka rogay sheeko yaab leh oo ku saabsan Cristiano Ronaldo – Gool FM
Manchester United's Portuguese midfielder Cristiano Ronaldo (L) and Manchester United's Welsh midfielder Ryan Giggs look on during a training session at the Carrington training complex, in Manchester, north west England, on May 20, 2009, in preparation for next week's UEFA Champions league final against Barcelona in Rome. AFP PHOTO/ANDREW YATES (Photo credit should read ANDREW YATES/AFP/Getty Images)
(Manchester) 13 Luulyo 2016. Rugcadaaga Man United Ryan Giggs ayaa daaha ka rogay sida yaabka lahayd ay Man United ula soo wareegtay Cristiano Ronaldo 2003-dii.
Giggs ayaa shaaca ka qaaday in heshiiska Ronaldo ee ku kacay waqtigaa 13-milyan oo qura la dhammeeyay intii ay kooxda baska ku sugeysay tababare Sir Alex Ferguson.
Ronaldo ayaa wacdaro ku dhigay daafacyada Man United kulan saaxiibtinimo ay Red Devils la yeelatay naadiga reer Portugal ee Sporting Lisbon.
Ferguson ayaa doonayay Ronaldo ka hor kulankaasi saaxiibtinimo laakiin Giggs ayaa daaha ka rogay sidii uu midka u sahminayay Man United saxiixa Ronaldo uu u diiday inuu ka soo tago garoonka isla habeenkaana uu u dhammeeyay heshiiska kabtanka xulka Portugal.
“Waxaad arkeysaa Ronaldo oo kubbada helaya waxaadna arkeysaa John O’Shea oo goysmo lagu gad-gadiyay, qosol yar ayaadna qac ka siineysaa.” Giggs ayaa sidaa yiri.
“Wuu shiday kulanka, dhammaan saaxibada kooxda isaga ayay la hadlayeen kulanka kaddib waana xusuustaa baska ayaan ku sugeynay, qofkastana wuxuu la yaabanaa waxa aan sugeynay.
“Intaa kaddib nux-nux yar ayaan helnay in heshiiska Ronaldo lagu soo af-jaray 13-milyan oo bound.”.
Wakiilka Arda Turan oo ka hadlay mustaqbalka wiilka reer Turki…(Waa halkee?)